INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA? – filazantsaramada
INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA?
Publié parfilazantsaramada	 septembre 28, 2012 septembre 26, 2012 Laisser un commentaire sur INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA?
INONA NO MANENTANA ANTSIKA HIVAVAKA? Nomen’Andriamanitra Ray safidy ny olona ny amin’izay tokony hivavahany. Misy ny mivavaka amin’andriamanitra tsy fantatra, ao ny mivavaka amin’ny masoandro, amin’ny volana, amin’ny kintana, amin’ny razana, amin’ny fanahy tsy fantatra. Fa ny Soratra Masina kosa dia mitaona ny olona hivavaka amin’ Andriamanitra Ray Mpahary, ary amin’ny Anaran’i Jesosy Kristy no fomba hanatanterahana izany vavaka izany. Maro ny antony manery ny olona iray hivavaka. Ny eto amin’ny Jakoba 5:16 dia ny mba hahazoana fanasitranana no antony: « Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha mba ho sitrana hianareo. » Mahavery hevitra ny olona ny aretina tsy mety sitrana, ary dia mivezivezy mitady fanasitranana etsy sy eroa ho an’ny marary. Mafy tokoa ny manana aretina, indrindra raha tsy mety sitrana. Ny Soratra Masina dia manambara amintsika eto ny mba hifampivavaka mba ho sitrana. Rariny raha mitodika amin’Ilay Andriamanitra Mpamorona isika raha misy zava-tsarotra mihatra amintsika, satria Izy dia Mpamonjy mora azo amin’ ny fahoriana araka ny Teniny. Ny eto amin’ity Jakoba 5:16 dia manambara fa tena antony iray lehibe azo hiantsoana ny Ray ny fanasitranana ny aretina. Mety ataon’Andriamanitra fitaovana hiantsoana ny olona iray handray Azy eo amin’ny fiainany ny aretina. Koa raha misy ny aretina, dia tokony hieritreritra ny olona sao dia mba fiantsoan’Andriamaintra azy izany mba hitodika Aminy. Mety ho fakampanahy koa mantsy ny aretina hampitodika ny olona hitady fanasitranana any amin’ny tsy izy, ka hitarika ozona, ary mety ho fahaverezana mandrakizay no hiafaran’izany. Indraindray raha tena mafy ny aretina dia mety tsy afaka mivavaka akory ny marary, raha ohatra marary tsy mahatsiaro-tena mety tsy mahatsiaro hivavaka ho an’ny tenany intsony izy, ary izay no mety anton’izao Teny izao. Ilaina ny mifampivavaka rehefa tsy manankery hanao izany intsony ny marary. Amin’izany fotoantsarotra izany dia mila hametrahantanana aza ny marary. Ny zavatra mahazendana anefa dia ny fisian’ny antony hafa manentana hivavaka. Matio 6:5 » fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin’ny synagoga sy eo anjorondalana ahitan’ny olona azy. » Tsy ny aretina na zavatra tsara no manentana azy hivavaka fa ny ho hitan’ny olona. Ambaran’ny Soratra Masina fa efa azon’izany olona izany ny valimpitiany: tsy Jesosy intsony no mankasitraka azy fa ny olona. Efa azony avy amin’ny olona ny valimpitiany. Aoka ary mba ho ny fitiavana an’ Andriamanitra Ray no hanentana antsika amin’ny vavaka, satria ny vavaka dia natao hiresahana amin’Andriamanitra fa tsy amin’olona.
Raha mbola misy efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia aoka arodana aloha izany efitra izany. ny helontsika no efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Mifona amin’Andriamanitra noho ny zavatra tsy nankasitrahany vitansika.
Tsy maintsy mandinika tsara ary isika ny amin’ny zavatra manentana antsika hivavaka, fa mety hanimba antsika sy ny ho avintsika, na mety hitondra fahasoavana ho antsika. Ny Tompo Jesosy hanolotsaina antsika!
amin’Andriamanitra fa tsy amin’ olona. Mivantana amin’Andriamanitra ny vavaka fa tsy mivantana amin’olona. Raha mbola misy efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra dia aoka arodana aloha izany efitra izany. ny helotsika no efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Mifona amin’Andriamanitra noho ny zavatra tsy nankasitrahany vitansika. Tsy maintsy mandinika tsara ary isika ny amin’ny zavatra manentana antsika hivavaka, fa mety hanimba antsika sy ny ho avintsika, na mety hitondra fahasoavana ho antsika. Ny Tompo Jesosy hanolotsaina antsika!
Publié parfilazantsaramada septembre 28, 2012 septembre 26, 2012 Publié dansUncategorized
Ny Feon’ny Filazantsara sy ny Ankany Fitaizana Tanora